cdifg [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/f/f1208133682ff63bf5befe5b113ed9ae.xhtml failed
CD - IFG
Eritreritra IFG v.3
( Eritreritra IFG v.2 )
Inty ny mailaky ny mpiandraikitra INFOGASY any Madagasikara (mahefa.randimbisoa /at/ gmail [dot] com), raha hangataka hanao dika na hindrana ireo boky isan-karazany efa nalefa any ianao.
Vita izao ny vokatra CD-IFG voalohany, ny wiki no navadika takelaka statika maromaro.
CD-IFG laharana 0.7
CD-IFG laharana 0.8 (16/12/2006)
Ny tanjona dia ny fametrahana ny sehatra IFG ao anaty CD mba hahafahana mijery ny lesona sy ny wiki tsy mila manana connexion Internet.
Azonao jerena ato ny dinika mikasika ny tetik’asa : Projet CD IFG
Ohatr’ohatra an’izao ilay tanjona nieritreretana azy:
Ny hampiasan’ny olona misimisy kokoa, sy tsaratsara kokoa ny informatika. (Ho an’ny informatisiana sy ny tsy informatisiana)
Mila maharaka fivoaran’ny teknolojia
Mila manana tahirin-kevitra ahafahana mianatra ireo izay mbola hanomboka
Mila ny fitaovana ilaina: tsy afaka manome ordi isika, saingy afaka mizara logiciels
Ny olana dia: mbola vidiana lafo ny connexion internet any dago, tsy afaka ivalamparana.
Manome cd gratuit misy tahirin-kevitra sy logiciel tsy ilana connexion, afaka hampiasain’izay manana ordi rehetra, na dia tsy zavatra tonga lafatra aza.
azo aparitaka amin’ny fomba malalaka, azo adika, azo omena, azo amidy, sns
azo ampiasaina avy ao anaty kapila henjana koa
Mety hoe somary ohatra an’ireny kompil cd ireny ilay izy izany fa miampy tahirin-kevitra amboniny!!!!!
Amin’izao voalohany izao isika no mety ho sahirana manao azy, fa avy eo inoako fa ho hitantsika ny hanaovana azy. Dia atao izay hamoahana version iray na roa isan-taona ohatra.
Tombontsoan’ny ifg mety ho azo amin’izay:
Faly mahatsangana zavatra, valoriser-na izay efa misy eo.
Fantatry ny olona
Fitaovana hoentina manaparitaka an’izay projet hafa mety hatao any aoriana
Mety hitombo ny fandraisana anjara?
Momba an’io resaka farany io, noeritreretiko izany hoe avela ho azo ampiasaina anaty kapila henjana ny wiki, azo soratana sy ovaina. Asiana tutorial kely ao ahafahana maka izay pejy novaina tao, ary angatahantsika avy any amin’ny mpamaky/mpanova ny fiovana avy eo.
Mety misy olona afaka/te-hanampy tsinona any, fa ny connexion no mi-limiter an’azy.
Tratran’ny kinova fahatelon’ny IFG ihany izy ity, fa mbola tsy mety masaka tsara Noho ny fiovana nentin’ny IFG v.3 dia manamora kokoa ny tetikasa CD IFG, satria natambatra ato amin’ny wiki daholo ny lesona sy ny wiki. Ary ambonin’izay dia wiki php no ampiasaina. Ilay vahaolana noheverina ho sarotra indrindra izany no nidirana.
Araka izany dia dokuwiki no ampiasaina. Mifamatotra amin’ny fikojakojana ny wiki koa izany ny asa sasany miaraka eto. Ireto izany no asa mila atao momba ny tetik’asa:
Momba ny vontoatiny
( Manatevina hatrany ny tahirin-kevitra efa misy )
Misaina izay fomba handaminana ny wiki. Alahatra anaty namespaces ny pejy raha ilaina
Manavaka ireo pejy mila esorina fa mijanona ho an’ny tranonkala (ohatra ireny ifgtodo, fikojakojana sns ireny)
Mametraka torolalana momba izay fomba hitondran’ny mpamaky fanovana, soso-kevitra, sns ... fa afaka mandray anjara koa ny mpamaky
Manamboatra lisitra sy fiches-na rindrankajy izay hampiarahana aminy.
Mametraka protocole harahina hanovana ny wiki tranonkala –> wiki cd
Momba ny rindrankajy hampiasaina
Mi-tweak ny dokuwiki mba tsy hanoratra anaty cache, na hanoratra n’aiza n’aiza satria read-only ny kapila manjelatra.
Manamboatra template wiki fotsiny (tsy misy an’ireo rohy eo ambony ireo)
Mampiasa ZMWS hatao webserver, mila esorina izay tsy ilaina ao toy ny MySQL mba hanafaingana ny démarrage-n’ny server.
Momba ny fandraisana anjara
Malalaka amin’ny fandraisana anjara ny mpikambana rehetra, ny mpitantana sy ny namana tsotra tsy ankanavaka, ny namana ao amin’ny serasera.org koa
Raha misy olona 2 na 3 mandray anjara mavitrika, dia hametrahana timeline ny hamoahana ny kinova voalohany. Ny voalohany foana manko no tena sarotra indrindra!
Rehefa voapetraka ny timeline, dia ilana olona afaka mahita contact any Dago, ao amin’ny Amul ohatra, na ireny fikambanana mpianatra ireny mba hanolotra ilay cd.
Raha mety dia mba asiana feedback avy amin’ny mpampiasa. Raha tsy izany sao tsy mampazoto intsony manko :)
Momba ny lesona: Ny lesona dia hotrohina, ka hahazoana pejy html statika.
Momba ny wiki: Ny wiki dia misy fomba roa azo anaovana azy:
trohina ohatra ny lesona ihany (io no tsotra indrindra)
ajanona ho dynamika, ka azo adika anaty kapila henjana, ary jerena avy ao. Ny olana kely dia mampiasa java ilay izy, ka tsy maintsy miaraka amin’ny java ny serveur. Ilay izy atao anaty cd anefa dia lasa mavesabesatra ny mandefa azy amin’ny voalohany (fa rehefa lasa izy maivana ihany).
atao dynamika fa avadika amina motera-na wiki hafa mandeha amin’ny php. Jereo eto ilay eritreritra. Ity anankiray ity no mety ho sarotra indrindra, fa sosokevitra hatsipy fotsiny.
Raha ilaina ho dynamika ilay izy, dia azo atao ny mampiasa webserver anaty cd hizarana azy.
- Screenshot tamin’ny kirakira namboarin’i Lapino ho an’ny tetik’asa ifgcd
cdifg.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43